COVID-19 (vaayirasii koroonaa haaraa) – Odeeffannoo, Tajaajiloota, fi Galteewwan Isteetii Waashingiton keessaa | Washington State Coronavirus Response (COVID-19)
COVID-19 (vaayirasii koroonaa haaraa) – Odeeffannoo, Tajaajiloota, fi Galteewwan Isteetii Waashingiton keessaa
Toora bilbilaa COVID-19: Hojjettoota, daldaloota, beellamoota talaalliiwwanii akkasumas kanneen biroos dhiyeessuu irratti ni gargaara
Waayee COVID-19 gaaffilee kamiyyuu yoo qabaattan yookin beellama talaallii argachuu irratti deeggarsa yoo barbaaddan, maaloo 1-800-525-0127 irratti bilbiluudhaan #tuqaa. Yeroo deebii kennanitti, Tajaajiloota turjubaanaa argachuudhaaf maqaa afaan keessanii dubbadhaa. Toorii bilbilaa yeroo hunda banaadha akkasumas sa'aatiiwwan isaaniis weebsaayitii Department of Health irratti (afaan Ingiliffaatiin) eeramanii jiru.
Badii daldalaa keessa jiruu gabaasaa
Dhaabbileen daldalaa hojjettootaa fi maamiltootaaf safartuuwwan fayyaa fi nageenyaa barbaachisoo ta'an mirkaneessuun irraa eegama. Badii gabaasuu yoo barbaaddan, afaan keessaniin deeggarsa argachuuf, maaloo toora bilbilaa COVID-19 armaan olitti ibsame irratti bilbilaa. Namni tokko waayee badii sanaa gaaffiiwwan isin gaafata akkasumas bakka keessan bu'uudhaan komii keessan isiniif dhiyeessa. Komii dhiyeessuudhaaf maqaa yookin odeeffannoo dhuunfaa qooduun dirqamaan isin irraa hin eegamu.
Komii keessan afaan Inigiliffaatiin fuula Report COVID-19 Violation irratti dhiyeessuu ni dandeessu.
Maqaa fi odeeffannoo qunnamtii keessan yoo kennitan, namni tokko odeeffannoowwan dhuunfa yoo kenne odeeffannoo sanaaf gaaffii yoo dhiyeesse itti himamuu akka danda'u hin dagatiinaa. Galmeewwan beeksisa Icciitii dhuunfaa mootummaa (afaan Ingiliffaatiin) jiran keessatti ibsaman akka Seeraa Galmeewwan Hawaasaa, RCW 42.56 mootummaa jalatti barbaadamaniin gadhiifamuu danda'u.
Gargaarsa fooyya'aa Hojjettootaa, daldalootaa fi dhaabbileedhaaf
Tajaajiloota Turjubaanaa fayyadamuudhaan, toorri bilbilaa gara qajeelcha fi qabeenyota waliigalaatti isini qajeelchuu danda'a. Ammallee gaaffiiwwan yoo qabaattan, Akka COVID-19 Gaaffiiwwan guca Daldalaa fi Hojjettootaa guuttaniifis isin gargaaruu danda'u. Akka deebiiwwan argachuu dandeessaniif odeeffannoowwan qunnamtii ni gaafatamtu.
Talallii Koronavaayirasii (COVID-19)
Waa’ee talaalliwwan COVID-19 odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan fuula talaallii COVID-19 ilaalaa.
Akkamitti bilbila keessanitti akka dabaltan dabalatee waa’ee WA Notify caalmatti baruu yoo barbaaddan, WANotify.org ilaalaa
Galteewwan Qaxarrii fi Daldalaan Walqabatan
Faayidaalee Hojii dhabdummaa
Yoo hojii kee dhabde, faayidaalee hojii dhabdummaaf ulaagaa guutuu dandeessa ta’aa. Yoo akkaataa iyyannoo faayidaalee hojii dhabdummaa itti guutan odeeffannoo barbaadde, 1 800 318-6022 irratti bilbiluu dandeesa. Yeroo isaan deebisan, afaan kee maqaa dha’I (waami) tajaajilawwan afaan hiikkaa argachuuf.
Hojjetootaa fi Abbootii Qabeenyaa Daldalaa
Weerarri vaayirasii koroonaa isteetii keenya keessatti hojjetootaa fi hojjechiiftota kumoota dhibbaan lakkaa’aman irrattii dhiibbaa fideeraa.
Hojjetoota nageenya isaanii eeguuf, hojjechiiftotnii wantii gochuu qaban:
Waa’ee agarsiisotaa fi mallattoolee COVID-19 hojjetoota isaanii afaan isaan hubataniin isaan barsiisuu.
Karoora fageenya qaamaa hojiirra oolchuu.
Qulqulleessuu fi jarmoota balleessuu (sanitizing) ammaa ammaa raawwachuu.
Harka dhiqannaa ammaa ammaa fi sirrii ta’e mirkaneessuu.
Hojjetootni dhukkubsatoon akka mana turan gochuun.
Gaaffilee waayee kaffaltii eyyama yeroo dhukkubbi, kaasaa hojjettootaa akkasumas yaada cuunfaa nageenya bakka hojiitiif deebiiwwan kennuuf ulaagaaleen Department of Labor & Industries irraa afaanota baay’eedhaan ni argama.
Yoo haala nageenyaa bakka hojii keetii yaaddoo qabaatte, Department of Labor & Industries kallattiin 800-423-7233 irratti bilbiluun komii galchuu dandeessa. Tajaajillonni afaan hiikuu bilbila irrattii nii jira.
Yeroo COVID-19 waa’ee hojii fi hojjetoota keessanii gaaffilee yoo qabaattan, Muummee Nageenya Qaxarrii 855-829-9243 irratti bilbililuufii dandeessu.
Yaala Fayyaa fi Galteewwan Inshuraansii Fayyaa
Inshuraansii fayyaa bilisa yookiin gatii gadaanaa ta’e argachuuf ulaagaa guutuu ni dandeesa ta’a.. Health Care Authority dhaaf 1-855-923-4633 irratti bilbili. Yeroo isaan deebisan, afaan kee maqaa dha’i (waami) tajaajiloota afaan hiikkaa argachuuf.
Uwwisnii Alien Emergency Medical (AEM) sagantaa namoota dhuunfaa kanneen yaalii fayyaa hatattamaaf ulaagaa guutan akkasumas lammummaa yookiin waan godaansi (immigration) isaan irraa barbaadu kan hin guunne, yookiin namoota ulaagaa guutan kanneen daangeffama waggaa-5 hin guunne.
Lakkoofsii Bilbilaa (hootlaayiniin) Help Me Grow Waashington 1-800-322-2588 irra jiruu sagantaalee fi tajaajiloota fayyaa garaagaraa kan ati ulaagaa guuttu adda baasuu fi akkati iyyannoo galchitu si gargaara. Kun kan dabalatu:
WIC (Sagantaa Nyaataa Dubartoota, Daa’imman reefuu dhalatanii fi Ijoollota)
Inshuraansii Fayyaa ijoollotaaf, dubartoota ulfaa fi ga’eessotaaf
Ittisa da’umsaa karaa Sagantaa Itti Gaafatamumma Fudhadhuu
Fayyaa fi kilinikoota karoora maatii
Ulfaa fi dhiyeessii mucaa
Deggersa harma hoosisuu
Isaan akkasumas sagantaalee nyaataa fi Galteewwan qabu.
Odeeffannoo Godaansaa fi Baqattummaa
Office of Immigrant and Refugee Afairs (OIRA)’n godaantotni haqoota waayee COVID-19 fi Sodaawwan Godaantotaa tiin wal-qabatan akka hubataniif ni gargaara.
Hospitaalonnii fi kilinikoonni haala lammummaa yookiin godaansa ICE waliin qooddachuun hin eeyyamamuuf.
COVID-19’f qoratamuun akkasumas dhaabbata tola oolaa yookiin yaala fayyaa gatii gadi hir’ate argachuun dandeettii kaardii magariisa yookiin lammummaaf iyyachuu kee hin miidhu.
Faayidaalee hojii dhabdummaaf iyyachuu yoo barbaadde lakkoofsa nageenya hawaasaa sirrii ta’e qabaachuu qabda. Waa’ee faayidaalee hojii dhabdummaa nama tokkotti dubbachuu yoo barbaadde 1-800-318-6022 irratti bilbili.
Faayidaalee hojii dhabdummaa fudhachuun dandeettii kaardii magariisaa yookiin lammummaaf iyyachuu kee hin miidhu seerota Baasii Hawaasaa jalatti.
Ulaagaa Boqonnaa Maatii fi Dhukkubaa Kanfaltii waliinii kan Isteetii Waashingitan nama COVID-19’n si jalaa dhukkubu kunuunsuuf yookaan ofii kee yoo vaayirasichaan qabamte of kunuunsuuf guutuu dandeessa. Faayidaa kana argachuuf lakkoofsa nageenya hawaasaa si hin barbaachisu. ESD’n ragoolii kan biroo gosa heedduu fudhachuu niinii danda’a.
Abbaa daldalaa taatanii yoo deeggarsaa barbaadaa jirtu ta'e, liqii yeroo balaa hatattamaa Bulchiinsa Daldalaa xixiqqoo Mootummaa Federalaa (Federal Small Business Administration) argachuuf iyyata galchuun Kaardii jiraataa yookin lammummaa argachuu keessan irratti dhiibbaa tokko illee hin fidu.
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA)n, yoo haala keessan irratti yookin miseensa maatii keessan irratti, yookin faayidaalee keessan irratti, shakkii qabaattan, hogganaan godaansaa yookin bakka bu’aan Department of Justice (DOJ) dhaan eeyyama argate abbaa seeraa godaansaa akka qunnamtaniif yaada gorsaa kenna. Abbaa seeraa Karaa American Immigration Lawyers Association (Gamtaa Abbootii Seeraa Godaantota Ameerikaa) argachuu dandeessu, yookin weebsaayitii dhaabbatichaa DOJ-accredited (Damee haqaatiin eeyyama kan argate) ilaaluu dandeessu.
OIRA’n sagantaalee baqattootaa fi godaantota kanneen itti aananiin gargaaran qaba:
Barbaacha hojii fi leenjii
Deggersa baqattoota dullooman, ijoollee, barattootaa fi kanneen biroof.
Sagantaalee idilee yeroo COVID-19 fageenyarraan (remotely) banaadha. Waajjirichi tajaajiloota haaraa qaba akka ati hojiif yookiin hojii dhabdumaaf iyyattuuf, barumsakee akka deggerattuuf, akkasumas gargaarsa manaa argattuuf si gargaaruuf. Deggersa Maallaqaa Baqataa fi Deggersa Fayyaa Baqataaf ulaagaa guutuun hanga Fulbaana 30, 2020’tti dheerateera.
Tajaajilootaa fi odeeffannoo dabalataaf, 360-890-0691 bilbilii.
Gaaffilee waa’ee mirga baqattootaaf, firoottan/hiriyyoota keessan kanneen hidhamaniif deggersa dabarsuu (referral), akkasumas odeeffannoo walfakkaatan biroof, lakkoofsa bilbilaa (hootilaayinii) Tokkummaa Cimdaa (Network) Godaansa Waashingiton 1-844-724-3737 quunnamuu dandeessu. Turjumaanni bilbilaa nii jira.
Fayyaa Sammuu fi Miiraa
Kun yeroo nama cinqu ta’uu danda’a. Siifi namoonni ati jaallattu kan dhiphatan, gaddan, sodaatan yookin aaran yoo ta’e kun homaa miti. Ati qofaa kee miti. Gargaasa barbaaduu fi gaafachuun rakkoo hin qabu.
Namni kamiyyuu karaa adda ta’een haala nama dhiphisuufi ulfaata ta’eef deebii kenna. Wanti baay’ee barbaachisaan ati gochuu dandeesuu ofiikee, maatiikee akkasumas hawaasa keen hamma dandeessu kunuunsuudha.
Yeroo ulfaataawan keessatti sirritti rawwachuuf maaltuu isiin gargaaraa? Bakkee baatee hiriyyootaa fi maatii waliin wal quunnamtee beektaa? Tarii hargansuu gadi fagoo fi hiixachuu wayii, shaakala qaamaa tokko tokko, yookiin hir’iba halkanii gahaa? Of kunuunsuuf yeroo dursaa kennuun, haata’u malee kun si barbaachisuu danda’a, dhiphina hir’isuufis nii gargaara.
1-833-681-0211 irratti Washington Listens’iif bilbili. Tajaajiloonni turjumaanaa karaa bilbilaa nii jira. Weerara COVID-19’f deebii kennuuf, Waashingitan sagantaa gargaarsaa Washington Listens jedhamu jalqabsiiseera. Namoonni warri tajaajiloota Washington Listens fayyadaman dhiphina olka’e tasgabbeessuufi jijjiirama COVID-19 booda dhufeen walbaruuf deggersa nii argatu. Washington Listens’iin nama kamiifuu Waashingitan keessatti banaadha ogeessa deggerutti bilbiluuf. Namoonni bilbilan deggersaa fi galteewwan waliiti dhuufeenya hawaasaa naannoo isaaniti quunnamtii argatu. Sagantichi maqaan hin ibsamu.
Yoo rakkoo keessa jirraateef nama tokkotti dubbatte gorsa argachuu barbaadde, filannoowwan muraasatu jiru.
Disaster Distress Helpline namoota dhiphinamiiraa balaa namaan yookiin uumamaan balaa dhufuun walqabatu keessa jiraniif gorsa hatattamaa balaa nii kenna bilbila kanaan 1-800-985-5990 bilbilaa. Tajaajila turjumaanaa argachuuf yeroo isaan deebisan afaan keessan maqaa dha’aa (waamaa). Sararri gargaarsaa guyyaa hundaa sa’aatiiwwan 24 nii jira.
Crisis Connections’n Sarara Balaa kan Sa’atiiwwan 24 kan gargaarsa hatattamaa namoota dhuunfaaf, maatiiwwanii, fi hiriyyoota namoota balaa miiraa keessa jiraniif nii kenna. Namoota Kaawuntii King keessa jiraatan tajaajila. Turjumaanni (afaan hikuun) nii jira. 1-866-427-4747 bilbilaa.
National Suicide Prevention Lifeline galteewwan ittisaa fi balaa namoota waa’ee of ajjeesuu yaadaniif nii kenna. Namoonni isin jaallatan sarara lubbuu oolchu (lifeline) irratti bilbiluu danda’u galteewwan argatanii maatii fi hiriyyoota isaanii gargaaruuf. 1 800-273-8255 bilbilaa. Lakkoofsi bilbilaa (hootlaayiniin) kun guyyaatti sa’atii 24’f, torbanitti guyyaa 7’f nii jira. Miseensota waraanaa duraaniif sarara gargaarsaa kan biraatu jira. 1 800-273-8255 irratti bilbilaatii akkasumas 1 tuqaa. Yoo rakkoo dhageettii qabaattee fi dhaga’uun sitti ulfaate, 1-800-799-4889 irratti bilbili.
Yoo ijoollee waggaa 18 yookiin isaa gadii qabaatte isaan nyaata bilisaa manneen barnootaa irraa argachuu danda’u. Ga’eeyyii miidhama qaamaa qaban kanneen sagantaalee barnootaatti galma’an ulaagaa nyaata manneen barnootaa argachuu nii guutu. Haalota baay’ee keessatti, nyaatonni sun bakkeen mana barnootaa alaa kanneenakka bakka konkolaataa geejjibaa itti dhaabatutti kennamu yookiin buusamuu danda’a. Aanaa mana barnootaa keessanii quunnamaa yoo isaan nyaata bilisaa ni afeeru tahe adda baafachuuf.
Kanneen ulfa ta’anif, haadholii reefuu da’anii fi ijoollee waggaa shanii gadii, nyaata karaa sagataa dubartootaa, daa’ima reefuu dhalatanii fi Ijoollee (WIC) Department of Health argachuu dandeessu. Deggersa afaaniif, 1-866-632-9992 irratti bilbili.
Baankilee nyaataa sa’atiiwwan isaanii jijjiiruu malu yookin fedhii sababii yeroo COVID-19 kanaaf olka’uu hedduminaan cufamuu malu. Maaloo utuu hin deemin dura bilbilaa. Northwest Harvest’n cimdaa baankii nyaataa isteetii guutuu keessa jiruudha. Maqaa magaalaa keessan saanduqa gara bita saanduqa magariisaa marsariiticharraa keessatti barreessaa.
Baha Waashingitan keessa jiraattu yoo ta’e tartiiba baankilee nyaataa Second Harvest irraa argachuu dandeessu. Tartiiba baankilee nyaataa naannoo keessaniif marsariitii kana irraa kaawuntii keessan filadhaa.
Kaardiiwwan nyaata bu’uuraa
Kaardiiwwan faayidaa nyaata bu’uuraa (EBT) nyaata bituuf kan tajaajilan yoo ta’u namoota hedduuf kan argamuudha. Lammiileen U.S. faayidaa kanaaf Fuula nyaata bu’uuraa weebsaayitii Kutaa Biyya Washington Qajeelcha Tajaajilawwan Hawaasaa Fi Fayyaa (Department of Social and Health Services) (DSHS).
Yaadannoo: Mootummaan federaalaa ulaagaa hojii kan yeroo rakkinaa kanatti dargaggoota tokko tokkoof hojii irra oolu dhorkeera. Haata’u malee mooyumman federaalaa isin faayidaa klanaaf ulaagaa guuyuuf lammii U.S. akka abadab barbaada.
Kaardiiwwan deebitii kan akka armaan oliyyi ibsamanii namooya lamii hin taane hedduu kanneenulaagaawwan saganyaa hundumaa guutaniif ni argama. Faayida kanaaf DSHS Sagantaa Gargaarsa Nyaataa Kutaa Biyyaa irratti (afaan Ingiliffaa qofaan iyyachuu ni dandeessu).
Odeeffannoo fi Galteewwan Maatiiwwaniif.
Yeroon kun maatii guutuuf baay’ee ulfaataadha. Akkamittiin akka haala kana ijoolee keessan waliin to’attaniif qabxiileen tokko tokko kunooti.
Bakka mijataatti mariilee maatii godhadhaatii miseensonni maatii akka gaaffiilee gaafatan jajjabeessaa. Afaan isaan hubataniin sodaa fi ilaalcha sirrii hin taane sirreessuuf ijoollee wallaalloo waliin marii addaa godhachuu itti yaadaa.
Hubannoo argachuu yoo qabaattaniyyuu, miidiyaa garagaraa yookiin miidiyaa hawaasaa kanneen sodaa fi yaaddoo babal’isan ilaaluu hir’isaa. Addatti hubadhaa (akkasumas daangessaa) hagam ijoolleen keessan waa’ee weerarichaa miidiyaa adda addaarraa yookiin miidiyaa hawaasaa irraa akka ilaalan.
Ijoollee deggeruu irratti xiyyeeffadhaa gaaffii akka gaafatan jajjabeessuunii fi haala si’anaa akka hubatan gargaaruun.
Waa’ee miira isaanitti dhaga’amuu dubbadhaa akkasumas isaan sirreessaa.
Akka isaan waan isaanitti dhaga’amu (miira isaanii) karaa fakkii kaasuu yookiin hojiilee biraan mul’isan gargaaraa.
Odeeffannoo sirrii hin taane yookiin hubannoowwan sirrii hin taane waa’ee tamsa’ina vaayirasichaa fi dhukkubni sirna hargansuu hundinuu vaayirasii koronaa haaraa kan COVID-19 fidu akka hin taane qabaachuu qulquleessi.
Haala mijataa mijeessi fi obsa dabalataa xiqqoo qabaadhu.
Idileen yookiin yeroo haalli jijjiiramu deddeebi’ii ijoollee kee ilaali.
Sagantaalee maatii keetii haala dhabataa ta’een kanneen akka yeroo irribaa, nyaata, akkasuma sochiilee qaamaa eeguun itti fufi.
Haalota nama dhiphisan biroo keessatti wantoota siifi maatii kee fooyyessan kanneen akka dubbisaa, fiilmiilee ilaaluu, muuziqaa dhaggeeffachuu, taphoota (games) taphachuu, shaakala qaamaa, yookiin hojiilee amantii kanneen akka (kadhannaa, karaa Intarneetii tajaajiloota hirmaachuu) hojjechuuf yeroo kenni.
Miirri kanneen akka kophummaa, namatti toluu dhabuu, sodaa dhukkubaan qabamuu, fi yaadda’uun deebilee sirrii haala na dhiphisu kanneen akka weeraraaf godhamaniidha.
Tapha nama dinqisiisuu fi hojiilee hiika qaban kanneen maatii kee fi duudhaa kee waliin waliigalan irratti hirmaachisi.
Odeeffannoo fi Galteewwan Dabalataa
Marsariitii Vaayirasii Koroonaa Muummee Fayyaa Isteetii Waashingitan
Tartii lakkoofsota bilbilaa fi tajaajiloota Ejensii Isteetii Waashingitan
Jiraatoota Waashingitooniif gargaaraa mana kiraa
Fuula marsaritii Gidduugaloota To'annoo fi Ittisa – COVID-19
Baasiiwwan mana keessaa kaffaluuf gargaarsa barbaadduu? Yeroo weerara COVID-19 itti kaffaltiiwwan human ibsaa, gaazii uumamaa yookin bishaanii kaffaluu yoo dadhabdan, gargaarsi ni jira.
Qabeenyota Ragaa ijaa